Xubno ku dhaw xafiiska Muuse Biixi oo lagu arkay Xafladda CaleemasaarkaAxmed Madoobe. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaXubno ku dhaw xafiiska Muuse Biixi oo lagu arkay Xafladda CaleemasaarkaAxmed Madoobe.
Xubno ku dhaw xafiiska Muuse Biixi oo lagu arkay Xafladda CaleemasaarkaAxmed Madoobe.
October 12, 2019 marqaan Faalloyinka, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 1
Sawiro laga soo qaaday xafladda caleemasaarka madaxwaynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu dhex arkay xubno katirsan xisbiga haya talada somaliland ee Kulmiye.
Agaasimihii hore ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Somaliland, Maxamed Aadan Ilkacase ayaa ka soo dhex muuqday caleema-saarka madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland iyo Guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa horey u sheegay in ay wafti u dirayaan Caleema saarka Axmed Madoobe.
Mudane Ilkacase ayaa ka tirsan Xisbiga Kulmiye isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Somaliland soo maray.
DAAWO:- Aadan Barre Ducaale oo bahdilay DFS sheegayna in Jubbaland iyo Kenya ay yihiin dowlado walaalo ah oo xiriir leh.
Muuse Shaani waxaan leenahay cunaqabateynta idoorka ka daa, caadi iska dhig cuqdad badanoow.